Maxay yihiin shuruudaha lagu xiray dib u billaabashada wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland? - BBC News Somali
Maxay yihiin shuruudaha lagu xiray dib u billaabashada wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland?
23 Disembar 2019
Adna Aaden Iscaamiil, Gudoomiyaha guddiga wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland u qaabilsan dhinac Somaliland
Wadahadalladii Soomaaliya iyo Somaliland ayaa hakad ku jiray tan iyo markii ay maamulka Soomaaliya la wareegtay xukuumadda uu madaxweynaha ka yahay Maxaamed Cabdullaahi Farmaajo. Laakiin hadda waxay guddiyada labada dhinac u qaabilsan wadahadalladaas ka hadleen sidii dib loogu laaban lahaa miiska wadahadalka.
Jamhuuriyadda iskeed madaxbannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland ayaa tabasho ka qabta dowladda Farmaajo, waxayna ku eedeysay inay meesha ka saartay arrimihii horay looga gudbay intii ay wadaxaajoodyadaas socdeen.
Dhinaca Soomaaliya, Guddiga Qaran ee dib-u-heshiisiinta iyo Wadahadallada u qaabilsan Dowladda Federaalka ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin inay wadahadal la furaan Somaliland.
Hadalkan waxay soo saareen kaddib todobaadyo ay wadatashi kula jireen ururrada bulshada rayidka iyo madaxda kala duwan ee dalka Soomaaliya.
Hasayeeshee xiisadda u dhaxeysa Soomaaliya iyo Somaliland ayaa dhawaanahan sarreysay, xilli Somaliland ay sheegtay in ay isaga baxday wadahadalladii ay kula jirtay Soomaaliya iyadoo ka cabanaysa arrimo dhowr ah islamarkaana aan ku ganacsaneyn guddiga uu magacaabay Madaxweyne Farmaajo.
Mas'uuliyiinta Somaliland ayaa sidoo kale ku eedeeyay dowladda federaalka inay waxba kama jiraan kasoo qaadday qodobbo horay loogu heshiisay intii ay jireen dowladihii ka horreeyay tan hadda jirta, gaar ahaan xukuumaddii uu madaxweynaha ka ahaa Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweynaha Somaliland: Turkigu ku keliyeysan maayo wadahadallada inaga iyo Soomaaliya
"Xog baan uruurineynaa inta aan wadahadal rasmi ah la galin"
Maalmahan waxaa magaalada Muqdisho ka soconayay wadatashiyo uu guddiga dowladda federaalka u qaabilsan wadahadallada la lahaa bulshada rayidka.
Xildhibaan Cali Axmed Jaamac Jangali, oo xubin ka ah guddigaas ayaa BBC-da u sheegay inay ku mashquulsan yihiin sidii ay xog badan uga heli lahaayeen dhinaca shacabka.
"Shirarka aan wadno waa shirar lagu xog wareysanayo dadka wax-galka ah ee bulshada Soomaaliyeed. Guddigu waa inay cilmibaaris sameeyaan, oo ay xog soo uruuriyaan inta aan la billaabin wadahadalka rasmiga ah ee ay dowladda federaalka ee Soomaaliya la galeyso Somaliland. Sidaas darteed, saddexdii bilood ee ugu dambeysay ayaan sameynay xog uruurin xoog leh, maantana waxaan annagoo taa ka duuleyna la shirnay dalladda ururrada bulshada rayidka ah", ayuu yiri xildhibaanka.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa bishii July soo magacaabay guddiga wadahadalka u qaabilsan
Guddigan oo uu madaxweynaha Soomaaliya magacaabay bishii July ayaa ilaa iyo hadda aan qaadin wax tallaabo ah, marka laga raabo xog uruurinta uu xildhibaan Jaamac sheegay.
BBC-da ayaa weydiisay waxa ay shirarkooda ka tari karaan dib u billaabashada wadaxaajoodka, wuxuuna ku jawaabay: "Dadka wakiilka laga yahay waa shacbiga Soomaaliyeed, sidaas darteed aragtida laga soo uruuriyo shacbiga Soomaaliyeed ayaa hageysa wadahadalka, waana qeyb muhiim ah oo ka mid ah geeddi-socodka wadahadalka".
Xildhibaan Jaangali ayaa Somaliland ugu baaqay inay u diyaar garoobaan wadahadalka.
"Waxaa laga sugayaa walaalaheen Somaliland inay soo magacaabaan guddi nala fal gasha oo wadahadalka nala billaaba. InshaAllah markay diyaar yihiin annaguna diyaar baan nahay, howysheennii waan wadannaa", ayuu yiri.
Hase yeeshee Somaliland ayaa mar walba ku soo celisa dhaleeceynta ay xukuumadda Farmaajo ugu jeediso inay caqabad ku tahay wadaxaajoodka.
Somaliland oo Shuruud ku xirtay dib u billaabashada wadahadallada
Somaliland: "Wadahadallada waxay ku sii socon karaan in heshiisyadii hore la meel mariyo"
Guddiga Somaliland u qaabilsan wadahadallada Soomaaliya ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin wadahadallada laakiin ay marka hore dowladda federaalka ka doonayaan inay meelmariso heshiisyadii horay loogu gaaray kulamadii ay labada dhinac yeesheen.
"In la wadahadlo waan soo dhaweyneynaa. Wadahadalladu halkii ay marayeen laga soo billaabo kii koowaad ilaa kii lixaad, waxaa dhacayay isu soo dhawaansho, umaddu way isu soo dhawaaneysay, waxaase nasiib darro noqotay in madaxweynaha dalka aannu jaarka nahay ee Soomaaliya Maxamed Farmaajo uu wada buriyo qodobbadii horay loogu heshiiyay oo dhan, oo intuu maalin soo toosay uu yiri saxiixyadii madaxweyneyaashii hore waxba kama jiraan, oo uu yiri diyaaradaha hallaga maamulo xamar".
"Haddii aysan heshiisyadii hore waxba ka jirin arrintu waa gacmadaalis"
"Waxaa isweydiin leh wadahadalladan imika la rabaa, ma kuwii horaa la ansixinayaa oo waa la sii wadayaa? Haddiise heshiisyadii hore ay noqdaan waxba kama jiraan waa gacma daalis. Waxaa la doonayaa madaxweyne qowl leh, oo wakaalad ka sita ummaddiisa, oo shicibka Soomaaliyeed soo doorteen, oo wixii madaxweyneyaashii hore ku heshiiyeen fulinaya, oo ixtiraamaya, awooddii uu ku fulin lahaana leh", ayey tiri Adna.
Waxay intaas ku dartay in sida kaliya ee ay diyaar ugu yihiin dib u billaabashada wadahadalka ay tahay in heshiisyadii hore la meelmariyo.
"Hadduu oggolaado sidey heshiisyadu ahaayeen, ee madaxweyneyaashii hore u saxiixeen, waxaan subaxa xiga diyaar u nahay wadahadalka", ayey tiri.
Labada dhinac ayaa u muuqda inuu midba kan kale ku riixayo mas'uuliyadda caqabadaha hortaagan sidii miiska wadahalka loogu noqon lahaa, lamana saadaalin karo sida ay isugu tanaasuli karaan.
Somaliland ayaa si iskeed ah madaxbannaani ugu dhawaaqday markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya, ku dhawaad 30 sano ka hor.
Tan iyo xilligaas waxay mas'uuliyiinteedu raadinayeen aqoonsi caalami ah.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbannaanida ee Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, ayaa maanta fadhi wada jir ah oo labada gole ee baarlamaanku yeeshay ka jeediyay khudbad sandeedka madaxweynaha.
24 Maarso 2019
Erdogan: 'Macron wuxuu ii sheegay in uusan ka soo horjeedin Islaamka'
Netanyahu oo inta is hilmaamay ku fariistay kursigii Ra'isulwasaaraha, balse laga kiciyay